खान नजान्दा बि’ष बन्छ दहि, ख्याल गरौँ यस्ता कुराहरु : – Sadhaiko Khabar
खान नजान्दा बि’ष बन्छ दहि, ख्याल गरौँ यस्ता कुराहरु :
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष २७, २०७८ समय: १९:२९:५०
दही स्वादिलो पे’य । दही गुणकारी पनि । दही से’वन गर्दा स्वास्थ्यमा अनेक लाभ मिल्छ । तर, दही खाने समय र तरिकामा भने ख्याल गर्नुपर्छ । किनभने दही गुणकारी हुँदाहुँदै पनि यसको से’वन गर्ने विधि र समय थाहा नहुँ’दा यो वि’षाक्त बन्न पुग्छ ।
दहीको अर्युवेदिक महत्व छ । यो स्वाद र स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, सौन्दर्यका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी मानिन्छ । दहीमा केहि यस्ता तत्व हुन्छ, जसले पाचन क्रियालाई चुस्त राख्न सहयोग गर्छ । तर, आर्युवेदले भन्छ, दही रा’ती से’वन गर्नु हुँदैन । किन त ?
यसका केही कारण छन्, – राति दही खाँदा पाचन क्रियामा ग’डबडी पैदा हुन्छ । यसलाई पचा’उनका लागि इनर्जी बर्न गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । धेरै मानिसहरु रा’ति खाएपछि सु’तिहाल्छन् । यसले झन् स’मस्या हुन्छ । रा’ति दही से’वन गर्दा शरीरमा इन्फे’क्सनको ड’र हुन्छ । यसले रुघा र खोकी लाग्न सक्छ ।
यसका साथै कतिपय अवस्थामा दही हा’निकारक हुनसक्छ । वा त्यसले पोषण होइन, वि’षको काम गर्न सक्छ । जस्तो कि, –शरीरको कुनै भाग सु’न्निएको छ भने रा’ति दही कदा’पि खानु हुँदैन । यसले सु’न्निएको झन् बढ्छ ।
–घुँडा वा जोर्नीको दु’खाईबाट पि’डित भएको अवस्थामा दही से’वन उपयोगी हुँदैन । अन्यथा यसले दुखा’ईलाई झनै बढाउनेछ । –हामी दहीमा विभिन्न मिश्रण बनाएर से’वन गर्छौं, खासगरी डि’जर्टको रुपमा । तर, थरीथरीका फलफूल दहीमा मिसाउँदा त्यो वि’षाक्त बन्न सक्छ ।
दही कहिले, किन र कसरी खाने ? – दही खाने उपयुक्त समय विहान हो । हात–गोडाको जलन, पेटको इन्फे’क्सन, अप’च, भोक नला’ग्नु, कम’जोरीका साथै अरु पनि थुप्रै सम’स्याहरु बिहान दही से’वन गर्दा ठीक हुन्छ ।
नास्तामा एक कचौरा दहीमा सख्खर मिलाएर खाँदा शरीरमा रग’त बढ्छ । यसमा यस्ता रसायनिक पदार्थ हुन्छन् जसले गर्दा यो दूधभन्दा चाँडै पच्छ पनि । अपच, कब्जियत, ग्यास जस्ता पेटको स’मस्या भो’गिरहेका व्यक्तिलाई दही वा त्यसबाट बनेको लस्सी, मोही आदिको उपयोग गर्नु फाइदाजनक हुन्छ ।
दही खाँदाका फाइदा –राति निद्रा नला’ग्ने सम’स्या छ भने दैनिक खानाका साथ एक कचौरा दही से’वन गरौं । –दहीको नियमित सेवन शरीरका लागि अमृत समान मानिन्छ । यसले रग’तको कमि तथा कमजोरी हटाउँछ ।
दूधले जब दहीको रुप लिन्छ, यसको सुगर एसिडमा बदलिन्छ । यसबाट पाचनमा मद्दत मिल्छ । भोक कम लाग्ने व्यक्तिहरुलाई दहीले एकदम फाइदा गर्छ । – दहीको मोही वा लस्सी बनाएर पिउँदा पेटको गर्मी शान्त हुन्छ । पेटमा गड’बडी हुँदा दहीमा विीरे नुन हालेर खाँदा पनि फाइदा हुन्छ ।
–अमेरिकी आहार विशेषज्ञहरुका अनुसार दहीको नियमित सेवन गर्दा आन्द्राको रो’ग तथा पेट सम्वन्धी रो’गहरुबाट छुट्कारा मिल्छ । –दहीमा मु’टुको रो’ग, उच्च र’क्तचाप, तथा गु’दाको रो’गहरुलाई बिसेक पार्ने ग’जबको क्षमता हुन्छ । यसले कोलस्ट्रोल बढ्नबाट रो’क्छ र मु’टुको धड्क’नलाई ठीक राख्छ ।
–दहीमा क्याल्सियम अधिक मात्रामा पाइन्छ । यो हड्डीहरुको विकासमा सहायक हुन्छ । साथै, दाँत, ता नङलाई पनि बलियो बनाउँछ । –पायल्स रो’गबाट पि’डित व्यक्तिहरुले दिउसो भोजनपछि एक गिलास मोही पिउँदा फाइदा मिल्छ । सकारात्मक सोच बा’ट ।